थाहा पाउनुहोस् यस्ता खाले सपना देखे के हुन्छ
एजेन्सी । यदि तपाइँले सपनामा विभिन्न चरा वा जनावरहरु देख्नु भो भने त्यसको अर्थ के होला ? यहाँ सपनामा चरा वा जनावर देख्दा हुने अर्थको चर्चा गरिएको छ ।
यी हुन् सेक्स टुरिजमको लागि प्रख्यात १० देश
कुन देशका मानिसहरुले गर्छन् सबैभन्दा धेरै ध्रुमपान
एजेन्सी । फ्रान्समा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा दश लाख मानिसहरूले धूमपान नगर्ने गरेको देखिएको छ।
एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानीको एक दिनको खर्च कति ?
दुःख गरी कमाएको पैसा कसरी जोगाउने ? यस्तो छ तरिका
मानिसकाे राशिमा हुन्छ कैयाैं रहस्य, बताउन सक्छ अघिल्लाे जन्मकाे समेत कथा
एजेन्सी । दुइचार अक्षरले बनेको राशिमा मानिसको कयौँ राज लुकेको हुन्छ ।
योग गुरु बाबा रामदेवको असली नाम राम कृष्ण यादव हो । उनको जन्म १९६५ मा हरियाणामा भएको थियो । उनको परिवार कृषि पेशामा आवद्ध रहेका थिए ।
रसियाका यी खतरनाक हतियारहरुका कारण थर्कमान् भएको थियो अमेरिका
प्रथम विश्वयुद्ध पछि सोभियत संघ नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो साम्यवादी देश बन्यो । तर दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिका सहित कैयौं पश्चिमा देशहरु सोभियत संघको दुश्मन बनिसकेका थिए ।